काठमाडौं : बलिउड अभिनेत्री सारा अली खानको ड्राइभर कोरोना पोजेटिभ भएको छ। खानले आफ्नो ड्राइभरलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएकी छन्। अभिनेत्री साराले आफ्नो ड्राइभरलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको त्यसपछि गरिएको परीक्षणमा आफूसहित आफ्नो परि...
काठमाडौं : कलाकार केदार घिमिरे 'माग्‍ने बुढा'ले कलाकारलाई सभ्य तरिकाले आलोचना गर्न आग्रह गरेका छन्। निर्देशक तथा कलाकार दीपाश्री निरौलाले राजेश हमाललाई दिइएको 'महानायक' उपाधिबारे दिएको विवादित टिप्पणीलाई लिएर यस्तो भनेका हुन्। ए...
काठमाडौं : नायक राजेश हमाल 'महानायक हो र?' भन्ने अभिव्यक्ति दिएर कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको चौतर्फी विरोध भएपछि नायिका केकी अधिकारीले दीपा छोरी भएर जन्मिनु नै गल्ती भएको बताएकी छिन्। दीपाको चौतर्फी विरोध गर्नेहरूप्रति व्यङ्ग्...
काठमाडौं : अहिले कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउनको नीति अख्तियार गरेका छन्। लकडाउन (बन्दाबन्दी) भनेको तिव्र रुपमा फैलिने संक्रामक रोग एक व्यक्तिबाट अन्य धेरै व्यक्तिमा नसरोस् भनेर लिइएको ‘सामाजिक दुरी’ कायम गर्ने नीति हो । २...
काठमाडौं : नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको चरित्रमै प्रश्‍न उठ्ने गरी विवादित सामग्री प्रसार गर्ने भारतीय टेलिभिजन जी न्यूजले शुक्रबार माफी मागेको छ। चिनियाँ राजदूत यान्छीसँग जोडेर 'ओलीकी इस्किया' का...
काठमाडौं : गायक टंक तिमिल्सिनाको १६ वर्षे उमेरमा बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। गीतमा टंकलाई गायिका प्रविशा अधिकारीले साथ दिएकी छन्। गीत गायक तिमिल्सिना को आफ्नै युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो दिपक शर्माको शब्द तथा संगीत रहेको गीतलाई ...
काठमाडौं : गायक प्रमोद खरेलको स्वर रहेको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘अरुलाई माया’ बोलको गीतमा सनम कठायत र समीक्षा पोखरेलको फिचर्ड रहेको छ। गीत एभरेष्ट ग्यालरीको युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको हो। सुदर्शन पो...
काठमाडौं : नेपाली सङ्गीतकर्मीले पनि विश्वव्यापी काम गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठले प्रमाणित गरिदिएका छन्। विश्व सङ्गीतको इतिहासमा पहिलोपटक १२ अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा सङ्गीत गरेबापत विश्वकै प्रतिष्ठित संस्था गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले सङ्गीतकार सन्त...
पर्वत : गीत समाजको ऐना हो। समाजको परिवेश जस्तो रहन्छ कलाकारले आफ्ना गीतसङ्गीतमा पनि त्यही परिवेशलाई उतार्ने गर्छन्। देश कोरोनाको कहरमा परिरहेको बेलामा कलाकारले पनि यसपालिको तीजका गीतमा कोरोनाकै विषयलाई उठाएका छन्। अघिल्लो वर्षका तीजका गीतहरूमा माइत जाने, दर खान...
काठमाडौं : गीतकार तारा अधिकारीको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक 'पराईको सिन्दूर' बोलको गीतमा नरेन्द्र प्यासीको स्वर तथा संगीत रहेको छ। सार्वजनिक गीतमा विछोड भएपछि हुने प्रेमलाई व्यक्त गरिएको छ। भिडियोमा जीवन भट्टराई र तारा अधिकारीको अभिनय रह...
काठमाडौं : गायक तथा मोडल चक्र बमले ‘गाजल’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन्। उनको आफ्नै युट्युव च्यानलबाट सोमबार यो गीत सार्वजनिक गरेका हुन्। गीत उनले आफ्नै शब्द तथा संगितमा तयार पारेका हुन् भने, एरेन्ज विक्रम बाबुले गरेका छन्।...
काठमाडौं : 'आधी कपाल' बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। गीतमा पछिल्लो समयका चर्चित गायक अमृत सापकोटा र गायिका समीक्षा अधिकारीले आवाज दिएका छन्। यही गीतबाट नायिकाका रुपमा देखापरेकी एलिजा गौतमले दोहोरी गीतमा डेब्यु गरेकी छन्। उनको साथै गी...
काठमाडौं : लकडाउनले सबैको सक्रियता ‘लक’ गरिदिए पनि बिस्तारै कलाकारहरुले आफ्ना सिर्जनाहरु डिजिटल बजारमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यस्तैमा गायक भुपु पाण्डे र गायिका प्रविशा अधिकारीको स्वरमा ‘मायालु’ बोलको बिल्कुलै नयाँ गीत सा...
धनकुटा : गीतकार तथा पत्रकार रमेशचन्द्र अधिकारीको रचनामा हाम्रो धनकुटा, राम्रो धनकुटा बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ। गायक तथा संगीतकार तुलसी पराजुलीको सङ्गीत रहेको गीतमा धनकुटाका अग्रज गायकहरुले स्वर दिएका छन। जसमा तुलसी पराजुली, शम्भु राई, कृष्णभक्त र...
काठमाडौं : एक भनाई छ, 'नाम होस्, बदनाम होस्, तर गुमनाम नहोस्!' यो धेरै हदसम्म चर्चाका लागि 'मुम्बइया शैली' पच्छ्याउने कलाकारहरूका हकमा लागु भइरहेको छ। चर्चामा आउन उनीहरू अनेक फण्डा निकाल्छन्। विवादमै आएर भएपनि चर्चामा रहिरहन उनीहरूको अन्तिम...
काठमाडौं : गीत समाजका प्रतिविम्ब हुन्। जुनसुकै शैलीका किन नहुन्, तिनले समाजको चित्र देखाउँछन्। चाहे खुसीका हुन् या वियोगका। गीतले मानसको मन मुटु छुन्छन्, दु:ख पीडा बोल्छन्। गीतका पारखी नहुने को पो होला र? नेपाली पनि प्रकृति प्रेमी, संगीत प्रेमी मानिन्छन्...
काठमाडौं : भारतीय कोरियोग्राफर सरोज खानको ७२ वर्षको उमेरमा हृदयघाटको कारण निधन भएको छ । मुम्बइस्थित गुरु नानक अस्पतालको उनको विहान १ बजेर ५२ मिनेटमा निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्इले जनाएका छन्। श्वासप्रश्वासमा गाह्रो भएपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थि...
काठमाडाैं : गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाको ‘बीच्च बीच्च २’ को सिक्‍वेल (एउटा फोटो खिच)’ सार्वजनिक भएको छ। अघिल्लो वर्षको तीजमा ‘बीच्च बीच्च’मा गीत ल्याएका थापाले यस वर्षको तीज अगाडि फेरि यसकै सिक्‍वेल ल्याएका हुन्। य...
Page 1 of 137 >>